Nacayb Naqshadeynta Mashiinka Raadinta | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 28, 2010 Sabtida, Oktoobar 31, 2020 Douglas Karr
Fiidnimadan waxaan la shaqeynayay macmiil ku saabsan sida loo xoqdo qoraalladooda baloogyada si loo kordhiyo taraafikada mashiinka raadinta. Waa wax la yaab leh sida hagaajin yar oo cinwaan ah, sharaxaad meta ah, cinwaan ama waxyaabaha laftiisu yeelan karaan. Waxaan dooranay boosteejo blog ah oo horey loo qoray, waxaan sameynay xoogaa isbedel ah, waxaana la socon doonaa natiijooyinka iyadoo la adeegsanayo Shaybaarada Maamulka.
Qaar badan oo naqshadeeyayaasha ah iyo horumariyeyaasha websaydhka ayaa qiimo dhimis ku sameeya qiimaha hagaajinta mashiinka raadinta. Si xiiso leh oo ku filan, waxay kudhacaan xirfadlayaasha SEO. Derek Powazek ayaa dhawaan qoray:
Hagaajinta mashiinka raadinta maahan qaab sharci ah oo suuqgeyn ah. Waa inaanay ku dhaqaaqin dad maskax ama naf leh. Haddii qof kugu dacweeyo SEO, waa lagaa dhigay.
Samee Maaha. Aaminaad Iyaga
Xaashida Waxaan ahaa halkii laga shakisan yahay xirfadleyda SEO sidoo kale… xitaa anigoo la hadlaya xaqiiqda ah inta badan waxa xirfadlaha SEO sameyn lahaa maxaa yeelay adigu waa suurto gal inaad keligaa sameyso. Haddii aqoonta kaa maqan tahay, ama aad ka maqantahay ilaha, ama aad ku jirto natiijada raadinta tartanka, xirfadlaha SEO ayaa sameyn doona farqiga oo dhan.
Waa inaan ku daro in qoraalka Derek uu leeyahay talo weyn, sidoo kale:
Wax weyn samee. Dadka u sheeg. Mar labaad samee. Taasi waa taas. Samee wax aad rumeysan tahay. Ka dhig mid qurux badan, kalsooni leh, oo dhab ah. Dhidid dhidid kasta.
Laakiin haddana wuu i lumiyaa…
Haddii aysan helin taraafikada, waxaa laga yaabaa inaysan fiicnayn. Mar kale isku day.
Waxaa laga yaabaa in. Waxaa laga yaabaa in? Waxaa laga yaabaa in?!
Fikirka Derek wuxuu macaamiishiisa gelinayaa qasaaro weyn. Dhibaatadu maahan xirfadleyaasha SEO, dhibaatadu waa makiinadaha raadinta laftooda. Ku kalsoonow xirfadlahaaga SEO, ha aaminin makiinadahaaga raadinta! Ha ku canaanan xirfadleyaasha SEO daciifnimada Google.
Isbeddelka Google ee mashiinka raadinta ee ka baxsan ereyada muhiimka ah wax yar buu ka caawiyey saxnaantaJust waxay noqotay uun a caan mishiinka… iyo wuxuu sii wadaa inuu si weyn ugu saleysan yahay ereyada muhiimka ah.
Derek waa khaldanyahay oo xoogaa bilaa taxadar ah… robots.txtpings, Sitemaps, darajooyinka bogga, adeegsiga erayga muhiimka ah… midkoodna caqli ma aha. Waxaan ka caawinnaa macaamiisha inay gaaraan darajo hagaajinta mashiinka raadinta maxaa yeelay way adag tahay in laga shaqeeyo xaddidaadaha mashiinka raadinta. Saaxiibkeyga asxaabta ah wuxuu ku sharaxayaa sidan:
SEO wuxuu ka caawiyaa shirkadaha inay qiimeeyaan halka laga rabo inay ku darajo saaraan.
Ku doodaya in SEO uusan aheyn qaab sharci ah oo suuqgeyn ah waa jaahil ka ah asalka 4 P's,, qiimaha, dallacaadda iyo meelaynta. Meelayntu waa aasaaska olole kasta oo suuqgeyn weyn ah! In kabadan 90% kalfadhi kasta oo internetka ah waxaa kamid ah qof sameeya baaritaan… haddii macmiilkaaga aan laga helin natiijada raadinta ee ku habboon, ma gudanaysid shaqadaadii. Ma rajeyn kartid mana rajeyn kartid meeleynta mashiinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad shaqeyso oo aad ku dhiirato inaan idhaahdo… dhidid.
Dhisida degel shaqeynaya macluumaad qaali ah iyo naqshad qurux badan iyo ma ku habeynta raadinta waxay la mid tahay maalgashiga makhaayad cajaa'ib leh, qaabeynta liis cajiib ah, oo aan dan ka lahayn meesha aad ka furato. Taasi kaliya ma aha jaahilnimo, waa masuuliyad darro.
Tags: Derek wuu soo baxaynecebSEOneo neceb
Suuqgeyntu Teknoolojiyad Siman Ma Leedahay?
Jan 28, 2010 saacadu markay ahayd 11:17 PM
Boostada weyn Doug - Waan ku raacsanahay waxyaabo badan oo Derek sheegay, laakiin markale, waxaan ka shaqeeyaa arimahan. Sifiican uma aqaan dhagaystayaashiisa, laakiin waxay umuuqataa inuu wax u qorayo akhristayaasha waxoogaa aqoon ah oo daabacaadda webka ah.
Khaladka aan u malaynayo in dad badani "wax garanayaan" ay sameeyaan ayaa ah in dadka kale oo dhami ay "ku jiraan". Haddii VP suuq geyn cusub uu dhaxlo degel websaydh ballaadhan oo la dhisay 1999, waxay hayaan waxyaabo badan oo kale inay sameeyaan marka loo maro dhismaha bogga warbixin ku saabsan waxa khaldan, waxayna u baahan doonaan khubaro ka caawisa inay maraan waxyaabo badan. waxyaabaha: Adeegsiga, naqshadeynta, waxyaabaha ku jira, raadinta, iyo saxanka jikada.
Waxyaabo badan ayaa laga sheegaa shaqaalaynta khabiir ku ah waxa dadku raadinayaan si ay kaaga caawiyaan inaad farsamayso joogitaankaaga iyo farriinta aad iyaga u hesho. Waan ku raacsanahay diidmada Derek oo dhan, iyo dhammaan wanaaggaaga 🙂
Anigu waan yara eexanahay, in kastoo, maadaama Derek qoraalkiisu waxbadan tilmaamayo jihada Raidious - abuuro nuxur wanaagsan, dadka u sheeg, oo hubi in la heli karo.